Mourinho tababare ma u noqon karaa Messi? Akhri Jawaabta Di Maria
HomeEnglandMourinho tababare ma u noqon karaa Messi? Akhri Jawaabta Di Maria
Laacibka khadka dhexe ee Manchester United, Angel di Maria ayaa sheegay in Messi ay farxad weyn u ahaan lahayd haddii uu la shaqeeyo Jose Mourinho, isla markaana ay si fiican isku fahmi lahaayeen.
27 jirka Lionel Messi ayaa lala xidhiidhinayaa in uu ka tegayo Cam Nou, iyadoo bilihii u dambeeyey la hadal hayay in uu ku socdo Chelsea, halkaasna ay ku kulmi doonaan oo uu tababare u noqon doono Jose Mourinho. Laakiin su’aal la isweydiiyey ayaa ahayd sidee ayay u wada shaqayn karaan Messi iyo Mourinho.
Di Maria oo ka jawaabay su’aashaas ayaa waxa uu sheegay in laba nin ay fiican oo aan shaki ku jirin u wada shaqayn doonaan haddii ay isugu yimaadaan Stamford Bridge.
“Ma qabo in Messi uu dhibaato kala kulmi lahaa la shaqaynta Mourinho, laakiin mabdi’iyan ilama aha in Leo uu doonayo in uu ka tago Barca. Way adagtahay in aad ka dhaqaajiso koox ku siisay wax kasta, oo aad kusoo barbaartay” ayuu yidhi Di Maria.
Di Maria oo hore ugu ciyaari jiray Real Madrid, waxa uu isbarbar dhig ku sameeyey Ronaldo iyo Messi, waxaanu ku adkaystay in ay laba shakhsi oo kala duwan yihiin.
“Mar kasta wax isku mid ah ayaan ka idhaahdaa: waa laba ciyaartoy oo kala duwan oo dhamaystiran. Leo ciyaar walba wuu ka muuuqdaa isagoo kubado gaagaaban iyo xirfad isticmaalaya. Laba ama saddex ciyaartoy oo cidhiidhi ku haya ayuu kubadda dhexdooda ku maamulayaa. Cristiano isna wuxuu isticmaalaa awood iyo laadad dhaadheer. Markaa waa laba kala duwan”. Ayuu yidhi Di Maria.
Di Maria waxa uu sheegay in haddii uu isagu FIFA ahaan lahaa uu laba Ballon d’Or kala siin lahaa labadan ciyaartoy.
Messi iyo Ronaldo ayaa ku guuleystay xiddignimada sannadka toddobadii sannadood ee u dambeeyey iyadoo uu Messi qaatay afar sannadood halka Ronaldo uu ku guuleystay saddex sannadood.
Chelsea Oo Rigoodhe Goor-xun Socod Ah Kula Barbaraysay West Ham + Sawiro
19/03/2016 Abdiwahab Ahmed
City Oo 7 Gool Ku Xasuuqday Stoke
Ramadan iyo Koobka Aduunka :- Ciyaaryahanada Muslimiinta Ah Ee Ciyaaraya Iyagoo Sooman Ciyaaro Koob Aduun Tan iyo 1986-kii